ESET Keys Finder V6.5 - MYSTERY ZILLION
ESET Keys Finder V6.5
ကျနော် မစမ်း ရ သေးပါ
work တယ် လို. ပြော ပါ တယ်
အဲ့တာ ကီး၀ယ်သုံးတဲ ့လူတွေ အတွက်ထင်တယ်
တကယ့်ကိုအသုံး၀င်သော software လေးပါ။ key တွေအကုန်လုံးက free ပေးပါတယ်။ username and password ကို copy and paste လုပ်ပြီး update လုပ်ရုံပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့အဆင်အရမ်းပြေနေပါတယ်။ဒါပေမယ့်အခု Microsoft Security Essentials ကိုသုံးနေပါတယ်။သူက freeware ပါ။ကိုယ့်ရဲ့windows ကအစစ်ဖြစ်ဖို ့လိုပါတယ်။
HELPING HANDS ARE BETTER THAN PRAYING LIPS!!